Wasiir Beyle oo sheegay in Somalia lagu leeyahay lacag gaareysa afar Bilyan iyo bar dollar… – Hagaag.com
Wasiir Beyle oo sheegay in Somalia lagu leeyahay lacag gaareysa afar Bilyan iyo bar dollar…
Posted on 28 Seteembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Shir jaraa’id oo uu qabtay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu faah-faahin ka bixiyay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay hagaajinta Maaliyadda isagoo xusay in lacag gaareysa afar bilyan iyo bar dollar oo deyn ah lagu leeyahay dalka Soomaaliya.
Wasiir Beyle ayaa sheegay inay Dowlado dhowr ah ay u yimaadeen una sheegeen inay Soomaaliya ku leeyihiin deymo, wuxuuna sheegay in ay u direen caddaymo muujinaya saxiixyadii Dowladdii hore ee Soomaaliya, maadaama uu Dalku ka dhacay bur-bur, isla markaana uusan jirin keyd loo noqdo.
Mudane, Beyle ayaa sheegay inay Dowladaha qaarkood ku guul darraysteen in ay keenaan caddeymo dhab ah oo lagu qanci karo, taasoo keentay inay ka jaraan Kharashaadkii ay sheegteen, taasoo hadda lacagta deynta ah ka dhigeysa 4 Bilyan iyo bar Dollar, halka ay markii hore ka ahayd 5 Bilyan iyo bar.
Hase yeeshee wasiirka ayaa sheegay in guulo ay gaartay dowlada Soomaaliya isagoo xusay shuruudihii ugu muhiimsanaa ee deymaha looga cafinayo Soomaaliya ay ka gudubtay ka hor waqtigii loogu tala galay sida ay qireen madaxda hey’adda Lacagta Adduunka.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya waxa uu sheegay in Soomaaliya ay deeq bixiyayaasha caalamka oo ay ugu horreeyaan Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub ay ugu deeqeen 427 Milyan oo Dollar-ka Maraykanka ah, iyagoo ka duulaya sidii ay Soomaaliya u fulisay shuruudihii ku xirnaa nidaamka deyn cafinta.
Wasiir Beyle waxa uu meesha ka saaray in ay deyn tahay Lacagta Bangiga Aduunka ugu yaboohay Soomaaliya, taasi oo ay warbaahinta qaar daabaceen shalay.
“Waxaan halkan ka sheegayaa inay Lacagtan Soomaaliya la siiyay ay deeq tahay, deyn ma qaadan karno “, ayuu yiri wasiir Beyle.
Hase yeeshee Bangiga adduunka ayaa shalay ku dhowaaqay in 80 milyan oo dollar ay ugu deeqeen dowlada Soomaaliya halka Midowga Yurubna uu ku dhowaaqay lacag dhan 116 milyan oo dollar.
Dabagalka Lacagta deynta ah ee caalamku ku leeyahay Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in ay ku ogaatay Wasaaradda maaliyada Lacag dhan Hal Bilyan oo Doollar inaan la heyn ciddii saxiixday iyo sida ay ku timid.
Dowladda Federaalka ayuu sheegay in madaxdeedu ay ka go’an tahay hagaajinta maamulka Maaliyada si caalamku u aamino loogana cafiyo deymaha lagu leeyahay iyo kobcinta dhaqaalaha si ay Soomaaliya u gaarto isku filnaan.
Wadahadallada deymaha caalamka looga cafinayo Soomaaliya ayaa dhamaanaya marka la gaaro Bisha May ee Sanadka soo socda, waxanay Dowladdu u muuqataa mid muhiimad gaar ah siisay hagaajinta maamulka maaliyadda oo ku xiran horumar ka Dalkeenna.